nifandimbiasan’ny lalao rugby sy ny fampisehoana rindran-kira notontosaina tetsy amin’ny kianjan’i Mahamasina feno hipoka tanteraka omaly alahady 14 septambra 2019 tontolo andro. Raha nampalai-nisaraka ny tanora ny rindran-kira niakaran-dry Tsota sy Leon Hill ary ry Bolo Pixx sy MIJAH sns… an-tsehatra ny tolakandro dia nampitsanga-nitoetra ny mpitia lavalava kosa ireo lalao rugby in-3 miantoana natrehana ny tapany maraina. Nampanantena ny mbola hanao tsaratsara kokoa noho izay efa vita Atoa Vévé amin’ny andiany faha-IV amin’ny taona ho avy.
Vokatra rugby tetsy Mahamasina omaly : Tfma Ankasina 32 – 32 –Ftm Manjakaray ; Tam Anosibe 24 – 20 Cnaps rugby ; 3Fai Ambalavao Isotry 31 – 31. Samy nahazo lelavola avokoa ireo ekipa nandray anjara ary notolorana amboara kosa ireo mpandresy.